ရုပ်ရှင်လောက၊ ဂီတလောက၊ စာပေလောက၊ ပန်းချီလောက အပါအ၀င် မျက်မှောက်ခေတ် မြန်မာ့အနုပညာနယ်ပယ်အတွင်း ကျော်ကြားသော၊ ထင်ရှားသော၊ လူသိများသော၊ သြဇာလွှမ်းမိုးသော အနုပညာဖန်တီးရှင်များနှင့် သူတို့၏ အနုပညာ ဖန်တီးမှု လက်ရာများ၊ အနုပညာရေးရာလှုပ်ရှားမှုများ အကြောင်းကို ရောင်စုံခြယ် တင်ဆက်ထားသည့် အစီအစဉ်။
ဆေးရောင်စုံ ရှုမျှော်ခင်း (၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၃)
502 April 2, 2015
ဆေးရောင်စုံ ရှုမျှော်ခင်း (၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၃) စာပေ ဂီတ ပန်းချီ ရုပ်ရှင် စတဲ့ ကဏ္ဍပေါင်းစုံက အကြာင်းအရာတွေကို တင်ပြပေးနေတဲ့ ဆေးရောင်စုံ ရှု့ မျှော်ခင်း အစီအစဉ်ပါ။ ဒီတပါတ်မှာ ၆ နှစ်ကျော်ကြာ အချိန်ယူပြီး ထုတ်ထားတဲ့ Heartless Forest စာအုပ်မိတ်ဆက်အပြင် အခြားအကြောင်းအရာတွေကို တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ရိုက်ကူး – ညိုမာသက် ၊ ဇော်ရန်နိုင် တည်းဖြတ်/တင်ဆက်- ညိုမာသက်
ဆေးရောင်စုံ ရှုမျှော်ခင်း (၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၃)
426 April 2, 2015
ဆေးရောင်စုံ ရှုမျှော်ခင်း (၂၈ စက်တင်ဘာ၂၀၁၃)
420 April 2, 2015
ဆေးရောင်စုံ ရှုမျှော်ခင်း (၂၈ စက်တင်ဘာ၂၀၁၃) ရိုက်ကူး – ညိုမာသက် ၊ ဇော်ရန်နိုင် တင်ဆက် – ညိုမာသက်
ဆေးရောင်စုံ ရှုမျှော်ခင်း (၂၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃)
490 April 2, 2015
မင်္ဂလာပါရှင် ဆေးရောင်စုံရှုမျှော်ခင်းအစီအစဉ်ကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာ တပတ်အတွင်းအနုပညာရေးရာ တွေ နဲ. အနုပညာရှင်တွေရဲ. လှုပ်ရှားမှုတွေကို တင်ဆက်ပေးမှာပါ။အခုတစ်ပတ်မှာ ပထမဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ စက်တင်ဘာ၂၁ရက်နေ. နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ကို နိုင်ငံတကာမှာတင်မကဘဲ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလည်း ကျင်းပတဲ. အကြောင်းပါ။အဲဒီလို ကျင်းပကြရမှာ အဖွဲ.အစည်းပေါင်းစုံက ဆင်နွှဲကြသလို အနုပညာရှင်တွေကလည်း သူတို.တတ်စွမ်းတဲ. အနုပညာနဲ့ ပြည်သူတွေကို ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို. ပြည်သူ့ဥယျဉ်ထဲမှာ နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ကို အနုပညာရှင်တွေက ဘယ်လို ကြိုဆိုပြီး ပရိတ်သက်ကို ဘယ်လိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်း ကြည့်ရှုခံစားကြပါအုံးရှင်။ ၂။ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားကို ထိုင်ကြည့်နေရတဲ့ အချိန်ဟာ ခဏလေးလို့ ထင်ရပေမယ့် အဲဒီကားတစ်ကားဖြစ်ဖို့ ဘယ်လိုဖန်တီးရလဲဆိုတဲ့ အခက်အခဲလေးတွေ ကို လည်း ဝေမျှတင်ပြချင်ပါတယ်။အဲဒါကတော့ ဒါရိုက်တာသီဟတင်သန်း ရိုက်ကူးပြီး ပျော်ပြီးရင်းပျော်ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးတဲ့ စီတီးဂေါ့ရဇော့ဟိုတယ်မှာ ရိုက်ကူးနေတဲ့ ရှုတင်မြင်ကွင်းကို လည်း တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ၃။ …Read more »
ဆေးရောင်စုံ ရှုမျှော်ခင်း (၂၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃)
597 April 2, 2015
ဆေးရောင်စုံ ရှုမျှော်ခင်း အစီအစဉ် မှာဆိုရင် စက်တင်ဘာလ ၂၁ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ကို မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်များအစည်းရုံး က ကျင်းပပြုလုပ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၂၁ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ကို အနုပညာရှင်တွေက သူတို့တက်စွမ်းတဲ့ အနုပညာတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက် ခဲ့တဲ့ အကြောင်း နဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးစကားသံတွေကို တင်ဆက်ပေးထားတာပါ။ ရိုက်ကူး – ညိုမာသက်၊ ဇော်ရန်နိုင် တင်ဆက် – ညိုမာသက်